Ireo bibikely fahita indrindra amin'ny iPhone 7 sy ny fomba famahana azy ireo | Vaovao IPhone
Ireo bibikely fahita indrindra amin'ny iPhone 7 sy ny fomba famahana azy ireo
Ny vokatra tonga lafatra dia tsy misy (efa hitantsika ny Olana iPhone 6), ary kely kokoa rehefa miatrika fampiroboroboana marefo sy marina isika eo amin'ny fitaovana sy ny rindrambaiko, ny mampiavaka ny orinasa Cupertino. Noho io antony io, ary rehefa lasa ny vanim-potoanan'ny Krismasy, dia mieritreritra izahay fa maro aminareo no mankafy ny fitaovanao vaovao amin'ny fomba milamina kokoa, Tianay holazaina aminao hoe inona ny olana mahazatra indrindra amin'ny iPhone 7 sy ny fomba famahana azy ireo. Amin'izany no ahafahanao manohy mankafy ny iPhone tsy misy tahotra na olana. Ka aza adino ny fanangonana ireo tsy fahombiazana mahazatra indrindra amin'ny iOS 10 sy iPhone 7, ho hitanao ve ilay mitondra anao mivadika?
Andao handeha any ary, ndao hanomboka ny lisitra hoe inona ireo tsy fahombiazana mahazatra indrindra amin'ny fitaovana finday vao natomboky ny orinasa Cupertino.
1 Hisits ny iPhone 7 (mitabataba)
2 Miseho tsy tapaka ny hafatra "tsy misy serivisy"
3 Olana amin'ny finday
4 Tsy hitako ny vokatr'ilay fampiharana Messages
5 Olana amin'ny fifandraisana Bluetooth amin'ny iPhone 7
6 Tabataba rehefa mangina tanteraka
7 Misy olana amin'ny iOS 10?
Hisits ny iPhone 7 (mitabataba)
Izahay dia miatrika ny iray amin'ireo adihevitra mahery vaika indrindra ary miaraka amin'izay koa ny resabe tsy mitombina izay nararaka tamin'ny iPhone 7. Mpampiasa maro no nampitandrina fa indrindra ireo andro voalohany taorian'ny fividianana, rehefa tafiditra ao anatin'ny lahasa goavana ny fitaovana, Na mihazakazaka mihazakazaka rindrambaiko na any aoriana, amin'ny fahanginana tanteraka, azo atao ny mandre feo kely elektrika mivoaka avy amin'ilay fitaovana.
Na izany aza, tsy ilaina ny mampiato ny rotary. Raha efa naheno an'io tamin'ny iPhoneo koa ianao dia aza matahotra, ity feo ity dia mahazatra amin'ny fitaovana misy processeur mahery, na solosaina izany na telefaona finday. Matetika ny feo dia tsy avoaka rehefa ambany ny enta-mavesatra ary tsy famantarana ny karazana tsy fahombiazana amin'ny telefaona izy io, fa fomba voajanahary izay maneho ilay izy ihany ilay mpanodina. Esory amin'ity feo "saika tsy re" ity ny ahiahy ary ankafizo hatrany ny findainao. Raha tena miteraka tsy fahafaham-po anao izany dia azonao averina amin'ny Apple Store izany.
Miseho tsy tapaka ny hafatra "tsy misy serivisy"
Mpampiasa iPhone 7 maro no nampitandrina manodidina ny daty fandefasana fa lany ny fandrakofan'izy ireo tanteraka amin'ny manga. Nitranga tampoka izany. Na izany aza, vintana ianao, ny zava-drehetra dia manondro fa noho ny olan'ny rindrambaiko iray noho ny olan'ny fitaovana ary manana vahaolana mora izy io.
Voalohany, raha te hamerina amin'ny laoniny ny serivisy isika dia tsy maintsy hamerina ilay fitaovana fotsiny, dia azontsika atao ny mamono azy io ary miverina toy ny mahazatra na mamerina azy amin'ny alàlan'ny fanindriana «Hery + Volume-«. Vantany vao vita io dia ho voavaha eo noho eo ny olana fa tsy ho an'ny ho avy. Ary voaporofo fa olana tamin'ny rafitra fiasa izany, noho izany zava-dehibe ny ahazoantsika antoka fa manavao ny iOS amin'ny kinova farany kokoa. Ho an'ity dia handeha isika Fikirana> Ankapobeny> Fanavaozana ny lozisialy ary andao hiroso amin'ny andiany farany an'ny iOS 10 izay tsy mijaly intsony amin'ity olana ity.
Olana iray hafa mahazatra ihany koa izay sendra mpampiasa iPhone 7 dia ny fahitany hatrany ny fanaraha-maso lavitra an'ny EarPods tampoka niasa tampoka. Amin'izany dia tsy afaka mampitombo na mampihena ny habetsahan'ny, ankoatry ny fahafaha-manao hafa apetraky ny EarPods eo amin'ny rantsantananantsika amin'ny alàlan'ny kitapo tokana ny bokotra fifehezana azy. Fantatray fa ity olana ity dia mety hahasosotra ary hieritreritra ireo mpampiasa tamin'ny voalohany fa ny lohan-tsofina dia ny lohan-tsofina.
Tsia, nanamafy i Apple fa indray mandeha io olan'ny lozisialy izay voavaha ao amin'ny iOS manaraka 10, noho izany dia mamporisika anao indray izahay hanamarina izay kinova farany indrindra amin'ny iOS ary raha apetrakao io dia inoana fa raha manana io tsy fahombiazana io ianao dia tsy nanavao. Mba handehanana any amin'ny rindrambaiko iPhone farany tsy maintsy mandeha Fikirana> Ankapobeny> Fanavaozana ny lozisialy ary ndao hiroso amin'ny tsimbadika farany an'ny iOS 10 isika hahafahana manadino ity tsy fahombiazan'ny iPhone 7 ity.
Tsy hitako ny vokatr'ilay fampiharana Messages
Ny iray amin'ireo olana mahazatra izay noho ny tsy fahampian'ny fahalalana na ny tsy fahalalana ny fomba fiasan'ny rafitra miasa. Mpampiasa maro no misafidy ny hampandeha ny fampiasa "mihena ny fihetsika" amin'ny findainy. Avy amin'ity finday ity dia vitany ny manaisotra ny tetezamita mahazatra an'ilay fitaovana, manao azy ho lasa mandeha haingana kokoa sy malefaka kokoa. Na izany aza, rehefa avelanao hampiasa an'io endri-javatra io dia mijanona tsy mampiasa fampiasa mpampiasa maro hafa ny rafitra miasa. Ny iray amin'ireo zavatra izay tsy ho afaka ho hitantsika intsony raha toa ka miasa io activité io dia ny effets visuels d'exploitation Messages, ireo izay nampiavaka ny fampiharana fandefasan-kafatra Apple tamin'ny fanavaozana ny iOS farany.
Mba hanafoanana azy io dia tsy maintsy alehantsika Fikirana> Azo idirana ary tadiavo ny "Mihena ny hetsika". Hisafidy ny safidy "Tsia" fotsiny izahay hahafahana mamerina ny vokany hita maso amin'ny rindranasan-kafatra.
Olana amin'ny fifandraisana Bluetooth amin'ny iPhone 7
Bluetooth, ilay namana an-tsaina mamela antsika hihaino mozika tsy misy tariby sy maro hafa. Na izany aza, ho an'ny mpampiasa sasany amin'ny iPhone 7 dia tena narary andoha io. Betsaka no nahita fa manana olana amin'ny fifandraisana ny rafitra miasa Bluetooth, na dia mampihena ny fomba fiasa miaraka amin'ny Apple Watch aza.
Mba hanandramana farany fa miasa indray ny Bluetooth amin'ny fomba marim-pototra dia manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay: Fikirana> General> Restore / Reset> "Avereno ny fikirakirana tambajotra". Tianay ny mahatadidy fa azo ampiasaina ihany koa io mamaha olana amin'ny fifandraisana WiFizaho, fa ny famerenana ny fikirakirana ny tambajotra matetika dia very ny teny miafin'ny iCloud Keychain, mahamenatra.
Toy izany koa, raha tsy voavaha toy izao ny olanao amin'ny Bluetooth dia tsara ny mandeha any amin'ny Apple Store na mangataka diagnostika telematika amin'ny Apple SAT izay hanondro raha mijaly amin'ny olana ny chip anao Bluetooth.
Tabataba rehefa mangina tanteraka
Ny mpampiasa tezitra sasany dia nitatitra «olana» kely izay matetika tsy hita intsony. Ary izany ve rehefa mirakitra horonantsary mangina tanteraka amin'ny alàlan'ny iPhone 7 Plus izy ireo, Rehefa milalao ny rakipeo ianao dia mety ho re ny feony kely, izay toa fanakantsakanana alaina amin'ny microphone. Apple dia tsy nihevitra izany ho olana, ary mety noho ny antony maro izany.
Amin'ny ankapobeny, ity karazana fitsabahana ity dia vokarin'ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny fitaovana toa ny Apple Watch na mpandahateny tsy misy tariby, izay miafara amin'ny fanelingelenana ny fandraisam-peo. Noho izany, manolo-kevitra izahay fa raha hanoratra anaty fahanginana mahafaty ianao ary hitanao fa mijaly amin'ity iPhone ity ny iPhone-nao, Hamarino tsara fa hanapaka ny Bluetooth sy Wi-Fi ianao mba hisorohana ny fanelingelenana mety ho an'ny fitaovana tsy dia mifandray loatra. Raha ny fahitana azy ireo dia tsy heverin'izy ireo ho olana goavana io ao amin'ny Apple Store ka ho sarotra aminao ny hahazo fanoloana na fanoloana fiantohana, satria matetika dia noho ny antony ivelany.
Misy olana amin'ny iOS 10?
Raha manana olana amin'ny iOS ny zavatra anananao dia aza hadino ny Ny lozam-pifamoivoizana matetika an'ny iOS 10 sy ny vahaolana.
Manana olana amin'ny iPhone 7 anao ve ianao? Ampahafantaro anay amin'ny hevitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ireo bibikely fahita indrindra amin'ny iPhone 7 sy ny fomba famahana azy ireo
Ao amin'ny isa 2, izay ilay iray, inona no mahazo ahy, havaozy izay tadiavinao ary avereno im-betsaka araka izay tadiavinao dia hitohy hatrany izany
Miaraka amin'ny tf, amin'ny toerana mahazatra, rehefa mamaly anao ny mpiresaka, dia mitsambikina ny tsy tanana, manapaka ny sofinao.
Manuel Bassanini dia hoy izy:
30 andro lasa izay no nanovako ny iPhone 6 ho lasa 7. Androany dia nijanona tampoka ny asany. Noheveriko ho batterie io, nampidiriko adiny iray dia tsy nirehitra izy io. Nanandrana nanangana azy indray aho ary nipoitra ny paoma fa avy teo dia narahin'ny efijery maizina. Nanandrana tamin'ny alàlan'ny ITunes aho hanamboarana indray ary tsy misy, diso aho. Tsy hitako izay hatao
Valiny tamin'i Manuel Bassanini
amerika dia hoy izy:
Salama manana iPhone 7 aho ary tsy nisy nipoitra intsony ny paoma kely, ary tsy miasa intsony izy io, nanana bateria 42% izy ary avy eo tsy mandeha intsony izao, inona no ataoko? Efa nanana ny iPhone rehetra aho ary tsy misy toa azy efa nitranga tamiko io
Mamaly an'i amerika
ny iphone 7 plus dia tavela tamin'ny écran eo am-pamonoana tsipika vitsivitsy mihodina amin'ny 360 degre ary tsy afaka manao na inona na inona intsony aho
Manana iphone 7 aho izay naharitra 3 volana. Indray andro maraina dia nalaiko izy io ary mainty. Tsy nandeha intsony io. Fiantohana izany ary novan'izy ireo tamiko. Naharitra 3 andro ny faharoa. Vetivety dia lany ny bateria ary nandoa azy ny vidiny. Avy eo dia nandany haingana be indray aho ary avy eo amin'ny fotoana iray hafa dia nanjary manga tanteraka ilay efijery. Naharay antso aho fa tsy afaka namaly azy ireo. Avelao izy hisintona tanteraka ary avy eo dia tsy nirehitra intsony. Namerina azy io fotsiny aho hitaky…. Efa nanana iPhones maro aho ary mbola tsy nisy toa ahy ny zavatra toy izany.
Mlight dia hoy izy:
Ny iPhone dia mihantona eo afovoan'ny antso ary manome lesoka amin'ny antso. Maharitra 3 minitra vao miverina
Mamaly an'i Mluz
MARIO VALVERDE CARDENAS dia hoy izy:
Novonoiko ny iPhone nateriko tany amin'ny ivon-toeran'ny serivisy ICE, ary tsy afaka nanampy ahy izy ireo, nilaza tamiko izy ireo fa tokony halefako ny safidin'ny fikarohana, nefa tsy misy, mbola tsy mandeha ihany io, ary tsy olana amin'ny famahana bateria izany.
Valio amin'i MARIO VALVERDE CARDENAS
mario villega dia hoy izy:
Manana iphone7plus aho. Nanomboka nikatona ho azy izy ary namoaka feo. Manaisotra ahy amin'izay ataoko izy io ary manomboka mitaky vola. Afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i mario villega
Juan Manuel Chavez Pinchi dia hoy izy:
Manana Iphone 7 aho izay naharitra 2 volana, tsy nisy nipoitra teo amin'ny efijery akory ny sarin'ny paoma, voaloa 90% izany, noraisiko ny telefaona peroviana ho antoka, nojeren'izy ireo izany ary satria misy volo saika tsy hita maso eo amin'ny Ny ampahany dia nandà azy, ny bateria dia lany ary tsy afaka manao na inona na inona aho hampandeha azy. efa fiasco io.
Valiny tamin'i Juan Manuel Chávez Pinchi
Chris dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko! Misy olona azafady raha manana valiny ianao. Mifanaraka amin'izany, ny ampahany fanairana dia tsy miseho, ary mazava fa tsy mandeha izy.
Valiny tamin'i Chris
ambony dia hoy izy:
ento any amin'ny ishop. Izy ireo no mpaninjara ofisialy any Peroa ary manome fanampiana izy ireo fa tsy mila fitaovana feno. Misy antoka iray taona tafiditra ao anaty boaty. andramo.
Valiny etsy ambony
Very ny bateriko, nampifandraisiko izy io ary ankehitriny dia tsy manome famantarana hialana amiko izany
Manana iPhone 7 aho ary manana ny fotoana sy ny andro napetraka, ary mba hipoitra eo amin'ny efijery, matetika aho no mamelona azy ary tsy mahazo ny ora na ny andro, ny sary ambadika fotsiny.
Rehefa maniry izy dia miseho indray
Ahoana no ahitsiana izany olana izany?
Silvia Liliana Campanello dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho, manana Iphone 7 plus aho ary tampoka dia tsy naneno ny wassaps
Nandeha tany amin'ny setting aho ary nampihetsika ny feo, tsy haiko, inona no hataoko ampiasaina azy io ary tena ilaina ny maneno rehefa tonga ny wassap.
Hitako ihany koa fa andro vitsivitsy lasa izay dia nisy volana sy padlock niseho teo an-tampony
Manantena aho fa misy afaka manampy ahy
Valiny tamin'i Silvia Liliana Campanello
mario raul dia hoy izy:
Manana iPhone 7 aho ary tsy te hampandeha ny wifi dia efa naveriko tamin'ny kinova farany 11.3.1 ary tsy misy na inona na inona mipetraka any Kiobà ary mampatsiahy anao aho fa tsy manana fivarotana paoma aho dia mila mitady vahaolana an-tserasera, izay afaka manampy ahy dia hisaotra anao aho, misaotra anao
Mamaly an'i Mario raul
Fabbie dia hoy izy:
Manana Iphone 7 Plus aho. Rehefa miteny amin'ny findaiko aho dia ambany dia ambany ny volan'ny mpiantso, mila miezaka aho mba hahafahako mihaino ary ny habetsaky ny findaiko farafaharatsiny.
Valiny tamin'i Fabbie
Gabriela pignoux dia hoy izy:
Izaho dia Gabriela Pignoux, mampiasa iphone foana. Tena ratsy izy ireo izao. Manana olana telo aho. Ny mihoatra. Te hahafantatra ny antony mahatonga ny efijery I7 ho lasa mainty aho, ary ny flehita miverina dia tsy mamaly tsara
Valiny tamin'i Gabriela Pignoux
tapaka dia hoy izy:
Manana iPhone 7, 2 volana ampiasaina vaovao aho, novonoina ary tsy niverina intsony, ampiakariko satria lany ny bateria,… omeko ho faty izy io? Novakiako fa maro no nitranga ... Alefako any amin'ny serivisy? mbola eo ambany fiantohana ...
Mamaly an'i costanza
Manana Iphone 7 aho nosakanana ary nandritra ny 2 andro lasa mainty ny écran, nipoitra ny mazanita fa tsy niverina intsony ny finday dia nateriko tany amin'ny IShop ary nolazain'izy ireo tamiko fa simba ny tabilao lojika fa ny finday tsia asa lava kokoa, tokony hanana drafitra tsy azo ihodivirana amin'ireo fahasimbana ireo izy Q dia olan'ny famokarana.
Re dia hoy izy:
Salama, ny iphone 7-ko dia maty tanteraka ary tsy afaka mamerina azy intsony aho. Ho very daholo ve ny fampahalalana, ny sary?
Mamaly an'i Re
Salama tsara. Ny olako dia tsy afaka manavao na mampiditra lalao sy fampiharana marobe amin'ny angon-drakitra finday aho ary nanandrana ny zava-drehetra, tsy maintsy averiko fotsiny ilay orinasa, misaotra
koda koda dia hoy izy:
vonoina ary ahantona irery tsy tapaka, maharitra 3 minitra.
Valio ny fart coded
ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ dia hoy izy:
Salama maraina, ny hevitro miaraka amin'ny Iphone 7 dia hoe miadana be izy izao ary nanana olana aho izao, mandefa SMS amiko izy ireo ary tsy afaka manokatra azy ireo hamaky azy ireo, mihidy ao ny efijery
tranga ary rehefa esoriko izy io hanombohana indray dia lafo be ny mandeha mandeha tsara
Misaotra mialoha ary miandry ny hevitrao aho.
Valio amin'i ANTONIO RODRIGUEZ FERNANDEZ
mayte dia hoy izy:
Hatramin'ity tolakandro ity avy amin'ny iPhone 7 dia tsy afaka mandre aho ary afaka miteny
Valiny tamin'i Mayte
Tsaho: programa fanoloana bateria iPhone 6s tonga amin'ny iPhone 6